Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဧပြီလ ၂၀၁၅	36
kai says: အောင်ဆန်း – အောင်ဆန်းစုကြည်
kai says: ၂ . ၉. ၁၉၆၀ ထုတ် မီးဒုတ်သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုကို သခင်အောင်ဆန်းပြောတဲ့စာပိုဒ်တချို့ 
မြစပဲရိုး says: ကြို ပြီး ပြောထားတယ်နော်။
မြစပဲရိုး says: အခု ဘက ကျောင်း တွေ ပိတ်လိုက် ရင် အဲ ဒီ ကလေး တွေ ကို ဘယ်သူ က တာဝန် ယူမှာ တဲ့တုန်း။
naywoon ni says: အဲ့ဒအချိုးလိုချင်​လို့ အစိုးရက နှပ်​​ကြောင်း​ပေးထားပြီး ဘုန်း​တော်​ကြီးသင်​စာသင်​​ကျောင်း ဆိုတာကို အား​ပေးအား​မြှောက်​လုပ်​ခဲ့တာ ။ အဲ့ဒိလိုလုပ်​ခြင်းအားဖြင့်​ ​နောက်​​လေးငါးနှစ်​အတွင်းမှာ ​ကျောင်း​ဆောက်​​ပေးစရာ မလို​တော့ဘူး ။ ​ကျောင်းမရှိ​တော့ ပရိ​ဘောဂ​တွေ ဆရာ ​တွေ မလို​တော့ဘူး ။ ယဉ်​​ကျေးမှု အစဉ်​အလာလည်းမပျက်​ သူလည်း ​ငွေကုန်​သက်​သာ ။ ပြည်​သူကလည်း အပြစ်​​ပြောမရ ။ ပိုင်​​တော့ ပိုင်​သားဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တချို့ကလည်း လူတိုင်းစာတတ်ေုမာက်​​ရေးဆို​ပေမယ့်​ အစိုးရ​ကျောင်းကိုရှိန်​ပြီး ဘက ပို့တဲ့ မိဘ​တွေ တပုံကြီး မျက်​မြင်​ကိုယ်​​တွေ့ပဲ​ပြောတာ​နော်​။
Alinsett@Maung Thura says: ဗမာပြည်မှာ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ရောယှက်တာကို သားတို့ကတော့ ထူးပြီး မျက်စေ့စပါးမွှေး မစူးပေါင်…
kai says: ကလေးတွေကိုတော့… ဘရိမ်းဝပ်ရ်ှမလုပ်ကြစေလို… ဘရိမ်းဝရ်ှဖြစ်အောင်.. မိဘတွေကိုယ်နှိုက်က.. တွန်းပို့မလုပ်ကြစေလို..။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အဓိက​ပြောချင်​တာက ဘက​ကျောင်းမရှိရင်​ ​သေစာရှင်​စာ​တောင်​ တတ်​​တော့မှာ မဟုတ်​တဲ့က​လေး​တွေ မ​ရေတွက်​နိုင်​တာမို့ လက်​ရှိမှာ အရှုံးပဲထ်ွက်​မှာပါ။ရိုက်​သွင်း မသွင်း ထိလဲမ​ရောက်​​သေးပဲ ကိုယ်​ပိုင်​စဉ်းစား​တွေး​ခေါ်ဖို့ လူတိုင်းစာတတ်​ဖို့ကိုက အများကြီး​ထောက်​ပံ​နေ​သေးတယ်​ဆိုတာပါ။
kai says: ကျုပ်ဆိုရင်တော့.. ဘကကျောင်းကို.. ကျုပ်ကလေးလွှတ်မည်မဟုတ်..။
မြစပဲရိုး says: သူကြီးမင်း က ဘယ်လို အရပ်ဒေသ က နေ ဒီ လို ပြောနေလဲ????
ဦးကြောင်ကြီး says: တူဂ မွတ်ပါစို ကားပါမစ်ရောင်းစား ကေအန်ယူ ဗိုလ်ချုပ်မြကရဲ…
pooch says: သိသလောက်ပညာရေးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခုချိန်ထိတော့ ကြားဖူးနားဝ ၂ မျိုးပဲ ရှိသေးတယ်
၂။ မျက်စိကမြင်တာကို မြင်တဲ့အတိုင်း ဦးနှောက်ကလိုက်လုပ်တာ အဲ့ဒါကို အလွယ်ပြောရင် ရုရှပညာသင်စနစ်နဲ့ ဂရိပညာသင်စနစ် (အနောက်ကလက်ရှိသုံးနေတာ ဂရိပညာရေး)
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပေးရရင် လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀အဆုံးအဖြတ်ကို စားမေးပွဲတခုထဲကနေ အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ဖြေဆိုနေကြရတဲ့ ပညာရေး မှန်သမျှဟာ ရုရှပညာထဲ အကျုံးဝင်ပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျောင်သားအားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပညာရေးဆိုတာ မရှိသလို ဆရာမအားလုံး နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပညာရေးဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး
ဒါကြောင့်မို့ တိုးတက်လှတဲ့ အမေရိကားမှာတောင် ကျောင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စုစုပေါင်း ၂၆၀ ရှိတယ် တကျောင်းနဲ့ တကျောင်းမတူဘူး ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ မတူသလို သင်ယူမှုတွေလည်း မတူဘူး တချို့တွေ နွေရာသီမှာ ပိတ်တယ် တချို့ မပိတ်ဖူး စာသင်ရတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူချင်းတူပေမဲ့ အခံခြင်း မတူတော့ သင်ယူပေးရတဲ့ နေရာမှာလည်း ကွာပါတယ်
ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်မှာ အဲ့နေရာမှာ မရှိတော့ဘူး သူများ တိုင်းပြည်က ဆရာဆရာမတွေ ပရိုတွေ မူလတန်း ကိုင်ရင် နားသည်အထိ မူလတန်းပါ
ဒီက ကျောင်းတွေ ဆရာတယောက်ထဲ ဘာသာစုံ နေအောင် အတန်းစုံမှာ သင်ရပါတယ် ကျောင်းလိုအပ်ချက်ကို လိုက်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် မြို့ငယ် ကျောင်းငယ် ဘကကျောင်းတွေမှာ ပါ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာဘာသာရပ်ကို လိုက်စားဖို့ အခြေနေ သိပ်မပေးပါဘူး
အစိုးရဘတ်ဂျက် လှမ်းပြီး ပုတ်တာမို့ တော်ရုံတန်ရုံ စေတနာနဲ့တော့ ဒီအစိုးရက လှုပ်မယ် မထင်ပါဘူး ဆိုတော့ ပြင်ချင်ရင် အစဆွဲထုတ် အမြစ်ပုပ်ရင် ဖြတ်ပြစ်မှရမှာပါ
စစချင်းပြင်ရင်တော့ ပွက်ပွက်ရိုက်နေတာက ဆယ်စုနှစ်မနည်း တဂျိန်းဂျိန်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ရာစုတခု ချီမှ ရလဒ်ကောင်း ထွက်မှာပါ
ဒါကိုကလည်း ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာမြောက်နေသလား မသိဘူး ကိုယ်တွေ မတည့်လေ သူတို့ ၀မ်းသာလေပါ
လောလောဆယ် အားကျမခံ လေသေနတ်လာပစ်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: အဲလိုလေးလုပ်ပါ.. ပုရ်ှမမရယ်..။ သိတာလေးတွေ.. ရှင်းပြဦးမှပေါ့…။
pooch says: မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြုဆိုတာကလည်း အကြောင်းမဲ့တော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး သေချာကြည့်တော့
ဒီနိုင်ငံမှာ လူမျိုးပေါင်း ရာချီ ရှိရာကနေ အခု update က ၃၀ ကျော်ပဲ လို့ ဆိုပြန်တယ် အတိကျတော့မသိရသေးဘူး ဖြစ်ပုံက ဗမာစကား တတ်တဲ့ ကရင် က ဗမာလိုပြောတာနဲ့ ဗမာစကား မပြောတတ်တဲ့ ကရင်ဖြေတာကို ဗမာက သွားကောက်တော့ လူမျိုးတူပြီး အခေါ်ဝေါ်ကွဲထွက်လာတယ် အဲ့မှာတင် လူမျိုးတွေ ဖောင်းပွကုန်တာ
အမှန်က အတူတူပဲ လူမျိုးက တခုထဲ မြန်မာလူမျိုးက အနွယ် ၄ မျိုးပဲ ရှိတယ်ဆိုတယ်
၄။မြန်မာ-မွန်အနွယ်တွေပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိတာရှိရင် ပြောပြ လင့်ပေးအုန်း ဒီနေ့ မောနင်းမီတင် မှာ MD ဦးနှောက်ဖောက်စားလာတာ သူကြီးကို အတုခိုးပြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: ကျုပ်သာဆို.. ကိုယ့်တိုင်းရင်းဘာသာစကားမကလို့.. အေလီယန်နဲ့ဘီကွီကွမ်စပ်ကျတဲ့ဘာသာနဲ့သင်သင်ခွင်ြ့ပုတယ်..။
အလုပ်မရ.. လူတောမတိုး..။ လူတွေကိုလိုက်လိုက်ချုပ်ချယ်.. ဥပဒေတွေစွတ်ထုတ်.. အလုပ်မဟုတ်..။
အစိုးရက..နေရာတကာ.. ကြောင်သေးပန်းနေတာကအစ.. ၀င်မပါသင့်..။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒါကိုတော့ သဘောချင်းမျှ ကြောင်းပါ။ :))))))))))))))
pooch says: အဲ့ဒါပြောတာလေ ကိုယ့်မှာလည်း လိုအပ်ချက်ရှိတယ် ဆိုတော့ အကုန်တော့ မရနိုင်ဘူးလို့
တကမ္ဘာလုံး English အခြေပြု သုံးနေရတာကြီးက အသိသာကြီးကို မီတင်မှာ နားမလည်ဘူး သေချာရှင်းပြလို့ ပြောတော့
တကယ်တော့ သူလည်း တွေနေတာပဲ အဲ့တချက်ကို ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရတော့ အဲ့ဒါထက် အရေးကြီးတာလုပ်ရမှာလို့ ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်ရမှာ အားနာလို့
တဆင့်ပြီးမှ တဆင့် သွားမယ်လေ နော့် ပြင်ပါ့စေအုန်း
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဘာသာ​ရေးနဲ့ပညာ​ရေး​ရော​ထွေးတာမဟုတ်​ဘူး အဲ့လိုဆို အစိုးရအ​ကောင်​အထည်​မ​ဖော်​ခင်​မထားလိုက်​ရတဲ့က​လေး​တွေက စ​တေးခံ​ပေါ့။ဟုတ်​​သေးဘူး။
kai says: အဲဒါကို.. သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေဖြေပေးသွားတယ်…
မြစပဲရိုး says: အသက် ၉၀ ဂျီဂျီဖားသားကြီး(great Grandfather) က မွေးတောင်မမွေး ရသေးတဲ့ ကလေး ကို ညံ့တယ် ပြောသလိုဖစ်နေဦးမယ်။ lol:-)))))
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အခုသူကြီးတို့​ပြော​နေပုံက ဒုံးပျံစီးတန်း​ရောက်​မလိုဖြစ်​​နေပြီ။
kai says: မင်းတုန်းမင်းနှင့် ငါးခြောက်ပြား၊ ကြိမ်လုံးနှင့် ကျောင်းသား၊ ဆရာနှင့် …..
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ သာ ဆို ကြိမ် နဲ့ လဲ အဆော် မခံရ ဘဲ အမှန် ကို ရောက်အောင် ဖြေနိုင် တဲ့ နည်းလမ်းသုံးမယ်။
kai says: ဘကပညာရေးနဲ့.. ဘုန်းကြီးကြောက်စိတ်က.. မောင်လွင်ကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးသွားသလည်း.. သမိုင်းမှာဆက်ပြတယ်လေ…။
pooch says: အဲ့ဒါကို ပြောချင်တာပါ အရီးရယ်
ဥာဏ်ချင်းယှဉ်မယ်လို့ ဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့ အတွေး Thinking ဘက်ပြန်ရောက်သွားပြီ အဲ့ဒါက နာဇီလူသတ်စခန်းကို ရောက်သွားတဲ့ နှိပ်စက်ခံ ဂျူးတယောက်က လွတ်လာခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းရှိတယ်နော်
မင်း ခန့် ကျော် says: ကျတော်အမြင်ကတော့
ဦးကြောင်ကြီး says: ပညာရေးသီးသန့် သင်ပေးတာ ဖြစ်ဖို့လိုဒယ်.. ခတ္တာက စစ်တပ်က ဘာသာရေး အသုံးချပီး လူတွေဆိတ်ကို ဖုံးလွှမ်းထားတာစိုဒေါ့ မီလွယ် မလွယ်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပညာရေးကို အားပေးတဲ့ အစိုးမရ တက်လာမှဗဲ လမ်းစပေါ်မြည်။
kai says: အဲလိုတွေ… ဖြစ်ကုန်.. ဖြစ်ဆဲ.. ဆက်ဖြစ်လတံ့..။
ခင်ဇော် says: တဂျီး ဆီ ကို သွားးးး
manawphyulay says: အယ်ဒီတာသင်ပုန်းက ဧပြီလဆိုလို့ မရောက်သေးပဲ တဂျီးက ဘာတွေတင်ထားပါလိမ့်ဆိုပြီး ၀င်ဖတ်တာ မတ်လဟာဖြစ်နေတယ်…… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Shwe Ei says: ..အစိုးရကျောင်းတွေ…နယ်စွန်နယ်ဖျား မကျန်..ရေမီး အပြည့်အစုံ..
…အိုက်အခြေနေ ရောက်ဖို့ နှစ်တစ်ထောင် တော့ မစောင့်ရလောက်ပါဝူး :P
ဥပမာ မိဘမဲ့တွေကို စောင့်ရှေက်ကျွေးမွေးရင်း စာသင်ပေးနေတဲ့ ဥပမာ တွံတေးဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်လို
kai says: ဘာသာရေးကိုသင်တာရပါတယ်..။